Top 10 websites iyo barnaamijyadooda u soo dirto fariimaha qoraalka ah si qarsoodi ah
Top 10 Shabakadaha Internetka iyo Apps soo dir Anonymous Text Message
Ma rabtaa in aad aad kaftan saaxiibo by diraya fariimaha si qarsoodi ah? Waa hagaag, aad ku sugan tahay meeshii saxda ahayd. Diritaanka sms qarsoodi ah waa fikrad cajiib ah kaftan in ka tagi doono saaxiibadaa murmin xaalkooda oo aad xaqiiqdii tahay. In maanta internetka, aad u badan oo websites in ku siin doonaa adeegyada fariin qoraal ah oo lacag la'aan ah ka heli kartaa. Si kastaba ha ahaatee, waa kaliya tiro yar oo ka mid ah website-yada oo u oggolaan doonaa inaad soo dirto fariin qoraal ah si qarsoodi ah oo aan wax diiwaan wax alla wixii.
Inkastoo aqoonsigaaga ma loo sheegi doonaa marka aad soo dirto fariin qof, la digay in aan la isticmaali fursad sida ay u diraan qoraalka si qarsoodi ah in loola jeedaa in lagu caayo ama dareen dhaawici qof. Hubi in la ogan doonaa in aad la isticmaalayo Ciwaanka IP: ga ah qalab aad ka. Xusuuso isticmaalka sms si qarsoodi ah loogu tala galay oo xiiso leh, oo kaliya in ay kaftan asxaabtaada iyo in ay gacan ka dood ma uusan carabaabin cida aad tahay.
Hoos waxaa ku qoran shan websites sare oo u oggolaan doonaa inaad soo dirto fariin qoraal ah si qarsoodi ah ula siidaynta ma aqoonsigaaga.
Website Smsti.in waa mid ka mid ah website-ka ugu fiican kuu ogolaanaya inaad si ay u qariyaan aqoonsigaaga halka ay farriin u diraysaa. Website-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariin qoraal ah oo A.villa 160 erayo ah. Url The in this site yahay
Adeeggu wuxuu fariin website-kan waa si dhakhso ah
Waxa kale oo aad eegi kartaa warar gaarsiinta fariimaha qoraalka ah in aad soo dirtay la isticmaalayo internetka ah.
Xayeysiis No lagu dari doonaa in aad fariin
Faa'ido ugu weyn ee website-kan waa in adeegyada ay SMS waxaa uun loo heli karo tirada Mobile Indian. Waxaad aan farriin u tiro kale oo aan Indian soo diri kartaa.
Tani waa weli website kale oo aad isticmaali karto si aad u soo diri qoraalka ah si qarsoodi ah. Sida Smsti.in, website-kan waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad u soo dirto fariin qoraal 160 eray.
Waxaad u diri kartaa fariimaha si qarsoodi ah adduunka oo dhan. Tani waa website keliya ee kuu ogolaanaya in aad in baaq loo diro si qarsoodi ah si meel kasta oo adduunka ah.
Adeegyada SMS Its waa lacag la'aan.
Waxaad mid ka mid fariin u tiro dhowr diri kartaa waqti isku mid ah
Waxay leedahay doorasho firfircoon Fariin u oggolaan doonaa in aad in baaq loo diro oo kala duwan si ay u soo xiriiro kala duwan
Waxa kale oo aad dooran kartaa in uu soo bandhigo magacaaga ganacsiga diiwaan halka diraya fariin ah.
Waddamada qaarkood ma ogolaan karaa bandhigay ee ID, mararna
Mararka qaar waxaad yaabaa in loo baahdo in la siiyo soo baxay qaar ka mid ah waraaqaha ka hor ID Qofka dirayo aad la ogolaado.
Halkan waa website kale SMS free la yaab leh oo aad isticmaali karto in uu diro farriin qarsoodi ah. Tani waxay la mid dhow waa kan ugu khayr oo dhan websites sida ay siinaysaa qolka aad ku qorto ilaa 500 eray (characters kale ee ku jira) farriin qoraal ah.
Fariinta ayaa kuu soo diri waxaa loo dhiibi doonaa in waqtiga dhabta ah.
Waxaad u diri kartaa farriin ah A.villa 500 erey halkii SMS
Waa lacag la'aan ah si ay u soo diray farriin ah
Xayeysiis No lagu dari doonaa in aad fariin.
Adeegan waxaa kaliya loo isticmaali karaa tiro mobile Indian
Waxaad u isticmaali kartaa in baaq loo diro adiga oo aan muujinaya aqoonsigaaga.
Fariin ah waxaa laga samatabbixiyaa isla markiiba aad ka riix badhanka la diro
Adeegan waa mid aad u dhakhso ah
Ma aha oo gebi ahaanba bilaash ah
Waxa kale oo aad ku diri kartaa fariimaha SMS text si qarsoodi ah si kaftan ah saaxiibkay ama inuu ka hadlo wax la isticmaalayo FooSMS.com
Waxa uu leeyahay awood ka mid ah 140 characters kaliya
Adeegyada Waxa jira degdeg ah
Waxaad u diri kartaa fariimaha free SMS
Waxaad heli kartaa SMS marketing.
Faa'iida oo keliya website tani waa in ay kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto SMS mid kaliya dhowr maalin kasta, in uu yahay, muddo 24 saac ah gudahood.
Top 5 Chine
Mar dambe ma aad yeelan welwelo in la basaasay iyada oo fariimo ah in aad soo diray.
Waxaa kaloo jira dhowr Chine oo loo isticmaali karo in ay u diraan farriimaha qoraalka ah si qarsoodi ah. Chine waxay u saamixi aad loo diro loona helo qoraalka, videos, sawirada iyo nooc kasta oo kale ee xogta laga yaabaa in aad rabto in aad soo dirto.
Halkan waxa ku jira ugu sareysa 5-ada aad u isticmaali karto qoraalka oo aan lagu bixin karaa aqoonsiga.
1: SNAP Chat.
Snapchat waa app a free Rasuul oo bixiya waxaad u soo dirto SMS ama nooc kasta oo kale oo fariinta la soo bandhigay qaab lahayn magaca ama aqoonsigaaga. Hay'ada qaataha ahi ma awoodi doonaan in ay ogaadaan ayaa gaadheysa US iyaga.
waxay kuu soo diri kartaa oo aad ka heli qoraalka si qarsoodi ah
The soo diray fariimo aan la ogan muddo ka dib.
Waxa kaliya ee ka shaqeeya qalabka android
2: shaarbo Anonymous qoraalka
Waxaa hadda fududahay in la sameeyo kaftan lighthearted oo fariin u diraya qarsoodi ah saaxiib. Tani waa run iyadoo la isticmaalayo app shaarbo Anonymous qoraalka. App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto oo aad hesho qoraalka si qarsoodi ah. Aqoonsigaaga dhammaantiis la qarsoon doonaa, ku alla kii aad fariin ay u soo diray.
Waxaa ka shaqeeya si aad u wanaagsan oo ku saabsan kiniiniga aan kaararka SIM
Waxaa gebi ahaanba si qarsoodi ah
Waxa aan la raad kartaa oo dhan
Waxa kaliya ee aad ku siinayaa 5 Qoraallada lacag la'aan ah ka dibna aad bixiso deynta ka dib
Tani waa app qarsoodi ah kuu oggolaanaysa in aad u soo dirto fariin Cidna. App waxa kale oo aan u qaata aad fariin muujin doonaa aqoonsigaaga.
Secure. Waxaa gebi ahaanba si qarsoodi ah
Waxaa si dhakhso ah
Waxaa loo isticmaali karaa Fasaad, tusaale ahaan loo hanjabay dad aan la garanayn.
Weligaa mala yaabtay oo ku saabsan waxa ka socda ee maskaxda ee dadka kugu xeeran? Haddii kaliya waxaa jiray hab ah in la ogaado! Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxaa jira app fariimaha kuwaas oo hadda ka dhigayaa suurto gal ah si aad u aragto waxa ay dadka kale waxaa laga yaabaa in fikirka ah - tan iyo markii ay si qarsoodi ah la wadaagi kartaa fikirradooda.
URL ayaa si app this Play]
Faa'iidooyinka Yik Yak
Waxay isku daraa awoodaha ee GPS iyo qoraalka fariimaha, si loo hubiyo in kaliya dadka lagu kaydsho arki kartaa "Yaks."
Waxay leedahay "Upvote" iyo badhamada "Downvote", sidaa darteed waxaad heli si aad u aragto kaliya tiirarka ugu xiisaha badan la wadaago. Tani waxay ku hayaa waxyaabo xiiso leh.
Waxaa gebi ahaanba si qarsoodi ah, sidaa darteed aad la wadaagto kartaa fariinta aan wax cabsi ah in lagu helay.
Qasaaraha Yik Yak
Waxaa ay leedahay awood ah isnacsiiyeen in ay isticmaalaan boocsadahana internetka.
Mararka qaarkood xisaab user ay gudanin ay weerarka ku lahaa khibradda in helo iyada oo layers ammaanka.
Tani waa app kale oo aad isticmaali karto si aad diro loona helo qoraalka badan ee gaarka ah. Qofna ma ogaan karo qofka aad xaqiiqdii tahay haddii aad doorato in aad u sheegto!
Text aan soo bandhigeen aqoonsigaaga
Fariimaha aad sii gaarka loo leeyahay sida aan xitaa milkiilayaasha app waxaa heli kara
Waxaad aan laguugu dhibeyn by xayeysiis
Adeegyada ay yihiin xoogaa gaabis ah
> Resource > Top List > Top 10 Shabakadaha Internetka iyo Apps u soo dirto fariin qoraal ah si qarsoodi ah